अनुहारमा अनावश्यक रौं आएर दुःख दियो ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
अनुहारमा अनावश्यक रौं आएर दुःख दियो ?
प्रकाशित मिति १४ असार २०७५, बिहीबार १५:०० लेखक नेपाली जनता
एजेन्सी । धेरैजसो महिलाहरु शरीरमा आउने अनावश्यक रौं हटाउनको लागि विभिन्न किसीमका विधिहरुलाई अपनाउने गर्दछन् । अनुहारमा आउने रौंहरु नाङ्गो आँखाले देख्ने हुदाँ यसले अनुहारको सौन्दर्यतामा समेत कमी ल्याउँदछ । त्यसैले महिलाहरु यस समस्यालाई सकेसम्म चाडैं हटाउने कोशिसमा हुन्छन् ।शरीरको अनावश्यक रौं हटाउने उत्पादनहरु बजारमा अहिले प्रशस्त मात्रामा पाईन्छन् ।
जसले तपाइँको रौं लाई केहि दिनको लागि मात्र हटाउन मद्धत गर्दछ । तर आज हामी तपाइँलाई अनुहारको रौं को समस्याबाट सधैंको लागि छुट्कारा दिलाउने प्राकृतिक घरेलु उपायबारे जानकारी दिन्छौं ।यस उपायमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरुमा पौष्टिक तत्व ( भिटामिन ) , खनिज पदार्थहरु प्रशस्त मात्रामा पाईनुका साथै यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण हुने भएकोले यसको प्रयोगबाट छालामा चमक आउनुको साथै छाला स्वस्थ हुने गर्दछ । हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठूलो अङ्ग छाला भएको कारणले गर्दा छालामा हामीले जे प्रयोग गरेपनि यसलाई रगतले सिधै सोस्दछ ।
अनुहारमा रौं पलाएर हैरान हुनुभएको छ ? स्थायी रुपमा यसरी हटाउनुहोस् (भिडियोसहित)
अनुहार तथा छालामा अनावश्यक रौं आएर हैरान हुनुभएको छ ? छ भने अब यो झन्झटबाट सदाका लागि मुक्ति पाउने उपाय नेपालमा आइसकेको छ । कसरी आउँछ रौं र यसलाई सदाका लागि कसरी हटाउने ? छाला तथा लेजर रोग विशेषज्ञ डा. राजनबाबु तम्झ्याका सुझावः
लेजरको माध्यमबाट शरीरको कुरुपतालाई हटाउन सकिन्छ । अनावश्यक रौं, ट्याटु, दाग, अनुहारमा देखापर्ने खाल्डाखुल्डीलाई कस्मेटिक पद्धति वा लेजरका माध्यमबाट हटाउन सकिन्छ । नेपालमा अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अनुहारको रौं हटाउन यो पद्धति प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
शरीरमा अनावश्यक राैं आउने कारण
१.पुरुषको तुलानामा महिलामा बढी यस्तो समस्या देखा पर्छ । कारण महिलामा हर्मोन छिटोछिटो गडबड हुने गर्छ ।
२. महिलाको पाठेघरमा ट्युमर पलायो भने पनि अनुहारमा पुरुषको जस्तै दाह्री, जुगा देखा पर्छ ।
३. छालासम्बन्धी कुनै पनि रोग लागेको छ भने यस्तो समस्या देखापर्छ ।
४. थाइराइट भएका व्यक्तिमा पनि यो समस्या बढी देखापर्छ ।
५. वंशाणुगत गुणका कारण पनि यो समस्या देखापर्छ ।
यो पद्धतिबाट यसरी रौं हटाउने
स्थायी रुपमा रौं हटाउन यो माध्यम सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । तुलानात्मक रुपमा यो पद्धतिबाट रौं निकाल्दा जोखिम न्यून मात्रामा देखा पर्छ । जुन रौं निकाल्नुपर्ने हो, त्यही रौंको फेदमा लाइट (एक प्रकारको किरण) राखेर रौं पलाउने नसालाई निष्कृय पार्छ । यो प्रक्रिया चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम ४, ५ पटक गरेपछि रौं स्थायी रुपमै हट्छ । यसले अन्य भागमा कुनै असर गर्दैन ।
एकदमै कम सङ्ख्यामा बाक्लो छाला हुनेहरुमा कहिलेकाहीँ अल्सरको समस्या देखापर्छ । तर यो १०० मा १ जनामा देखा पर्न सक्छ ।
यो पद्धति कत्तिको महँगो छ ?
लेजरको माध्यमबाट रौं हटाउन धेरै खर्च लाग्दैन । जानकारी भए सबै वर्गको पहुँचमा पुग्छ । धेरै समय पनि लाग्दैन ।
रौं निकालेपछि यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ
१. २, ४ दिनसम्म सूर्य प्रकाशबाट जोगिनुपर्छ ।
२. जथाभावी क्रिम तथा औषधीको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
काठमाडाैं । मानविकी विषय लिएर कक्षा १२ पूरा गरेकाहरू विदेशमा चिकित्साशास्त्रमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएर…
काठमाडौं । मोटोपनले तपाईंको यौनप्रतिको रुचि घटाइरहेको हुन सक्छ । यदि अहिले नै सतर्क रहनुभएन भने भविष्यमा पछुताउनुपर्ने अवस्था…
डाक्टरद्वारा कर्मचारी कुटिए, अवस्था गम्भीर
राजविराज। बिरामीलाई आफनो क्लिनिकमा नपठाएको भन्दै राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालका एक डाक्टरले एक क्लिनिकका कर्मचारीलाई कुटपिट…
फेरि पनि भण्डारीकै पालो, केपी शर्मा ओली भण्डारीलाई नै राष्ट्रपतिमा दोहोर्‍याउने पक्षमा !
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २९ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने कार्यक्रम तय गरेसँगै वाम गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेमा…